Isco, Pepe, James, Pogba, Carrasco, Griezmann & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga – Wararka Ciyaaraha Maanta
Isco, Pepe, James, Pogba, Carrasco, Griezmann & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga
June 8, 2019 kooxda Suuqa, Wararka Maanta 0
Kooxda Juventus ayaa diyaar la ah xiddigaha Alex Sandro, Douglas Costa & Paulo Dybala iyo waliba lacag si ay u helaan saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Man United ee Paul Pogba (La Gazzetta dello Sport).
Kooxda Napoli ayaa kooxaha Juventus iyo Man City kula biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Real Madrid ee (Diario Sport).
Tababare Maurizio Sarri ayaa doonaya in uu chelsea kala wareego xiddiga daafaca Bidix ee Emerson Palmieri marka uu noqdo tababaraha Juventus si uu ugu badalo Alex Sandro (Corriere dello Sport).
Kooxda Inter Milan ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhawdahay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Cagliari ee Nicolò Barella kaas oo ay doonayso in ay dhamaystirto saxiixiisa Isniinta (Corriere dello Sport).
Kooxda Ac Milan ayaa suuqa dhigtay xiddiga khadka dhexe ee Franck Kessie laakiin kaliya aqbali doonta lacag dhan 30 Milyan oo euro (La Gazzetta dello Sport).
Goolhayaha kooxda Real Madrid ee Thibaut Courtois ayaa Eden Hazard ku soo dhaweeyay “Kooxda ugu Fiican Adduunka” kadib markii ay Rela Madrid ku dhawaaqday saxiixiisa (Football Espana).
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Chelsea ee Tiemoue Bakayoko ayaa ku soo laabtay Chelsea isaga oo sheegay in uu doonayo in uu sii joogo kooxda (L’Equipe).
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Newcastle ee Sean Longstaff oo diirada u saaran Man United ayaa iska diiday in uu xagaaga ku biiro Man United (Indy Football).
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann ayaa sheegay in uu haatanba ogyahay kooxda uu ka ciyaari doono xilli ciyaareedka dambe (Indy Football).
Tababaraha Kooxda Inter Milan ee Antonio Conte ayaa Mauro Icardi u sheegay in uu isaga tago kooxda xagaagan (Football Italia).
Kooxda Real Madrid ayaa Man United u soo bandhigi doonta saxiixa xiddiga James Rodríguez si ay u hesho saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Paul Pogba (Daily Star).
Kooxda Arsenal ayaa ku dhaw in ay kooxda shiinaha ka dhisan ee Dalian Yifang kala heshiiso saxiixa xiddiga garabka ka ciyaara ee Yannick Carrasco kaas oo ku kacaya lacag dhan 28 milyan oo euro (ADsportwereld).
Kooxda Liverpool ayaa la sheegayaa in ay kooxda Lilla kala heshiisay saxiixa xiddiga Nicolas Pepe xilli haatan Liverpool Loo ogolaaday in ay heshiiska shaqsiga ah la gasho xiddiga una duuli Liverpool si uu tijaabada caafimaadka ugu maro (The Firm).